Etu esi ebufe weebụsaịtị WordPress gi na ngalaba ohuru | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 26, 2019 Na Mọnde, Nọmba 26, 2019 Douglas Karr
Mgbe ị na-arụ ọrụ na saịtị WordPress gị n'otu ụlọ ọrụ ma chọọ ịkwaga ya na onye ọzọ, ọ dịghị mfe dịka ị nwere ike iche. Ihe omuma nile nke WordPress nwere ihe 4… akụrụngwa na IP address ọ kwadoro na, na MySQL database nke ahụ nwere ọdịnaya gị, ebugo faịlị, gburugburu na plugins, na WordPress onwe ya.
WordPress nwere usoro mbubata na mbupụ, mana ọ na-egbochi ọdịnaya n'ezie. Ọ naghị edobe iguzosi ike n'ezi ihe nke onye edemede, ma ọ bụghị ịkwaga nhọrọ gị - nke dị n'obi nke ntinye ọ bụla. Ogologo akụkọ dị mkpirikpi… ọ bụ ezigbo ihe mgbu!
ruo mgbe BlogVault.
Iji ya BlogVault, M tinyere ngwa mgbakwunye na saịtị m, tinye adreesị email m maka ọkwa, wee banye URL m na FTP ọhụrụ m. M pịrị gaa njem… na minit ole na ole ka e mesịrị, enwere m ozi email na igbe mbata m na saịtị ahụ kwagara.
Agaghị m eme ihe ọ bụla… nhọrọ niile, ndị ọrụ, faịlụ, wdg. Ha kwagara nke ọma na sava ọhụrụ ahụ! Ewezuga ngwa ọrụ Mbugharị ha dị egwu, BlogVault bụ ọrụ nkwado ndabere zuru oke nke na-enyekwa atụmatụ ndị ọzọ:
Nweghachi ule - youchọrọ ịlaghachi na ụdị nke saịtị gị gara aga? Ma olee otu ị ga-esi mara ma nke ahụ ọ bụ n'ezie eziokwu? BlogVault na-enye gị ohere ịkwado ụdị nkwado ndabere ahọpụtara na sava nyocha ha ọ bụla ma ị ga - ahụ ya ka ọ na - arụ ọrụ dịka ezigbo weebụsaịtị.
Auto Weghachi - N'agbanyeghị na ọ bụrụ na mkpokọta weebụ gị emebi, ma ọ bụ njehie mmadụ kpatara ọdịda, BlogVault ga-anọnyere gị mgbe niile iji mee ka ị kwụghachi n'ụkwụ gị ngwa ngwa. Akụrụngwa-weghachite na-akpaghị aka weghachite nkwado ndabere na ihe nkesa na oge awa gị, na-enweghị mkpa maka itinye aka.
Security - BlogVault na-ekwe nkwa nchekwa 100% site na ịchekwa ọtụtụ nnomi nke ndabere gị na ọnọdụ nke na-anọghị na weebụsaịtị gị. A na-echekwa ndabere gị, nke ezoro ezo, na ebe nchekwa data echekwara yana na sava Amazon S3. N'adịghị ka ojiji nke Amazon S3 oge niile, ha anaghị echekwa nzere dịka akụkụ nke saịtị ahụ, si otú a na-ebelata ọ bụla hacks nwere ike.
History - BlogVault na-ekwusi ike ụbọchị 30 nke ndabere gị ka ị nwee ike ịlaghachi na nke ọ bụla n’ime oge ọ bụla.
backups - BlogVault nakweere usoro mgbakwunye maka ndabere, weghachite na usoro mwepụ. N'agbanyeghi ma BlogVault na-akwaga, na-akwado, ma ọ bụ na-eweghachi saịtị, ha na-arụ ọrụ na ihe gbanwere kemgbe mmekọrịta ikpeazụ. Nke a na-azọpụta oge na bandwit.
Debanye maka BlogVault
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ BlogVault.
Tags: blogvaultotúotu esi ebufe WordPress na ngalaba ohuruesi wordpressakwagide WordPressakpali WordPressbufee wordpressWordPress